Kaominina telo eto Madagasikara no an-dalana mankany amin'ny fangaraharan'ny tetibola! - Transparency International - Initiative Madagascar
Kaominina telo eto Madagasikara no an-dalana mankany amin'ny fangaraharan'ny tetibola!
Nivoaka ny 24 Novambra 2016 ao amin'ny
Kaominina manodidina ny roapolo eo anivon’ny faritra telo eto Madagasikara no hiasan’i Transparency International-Initiative Madagascar mba hanatsarana ny fangaraharana eo anivon’ny fitantanana ny volan’ny kaominina.
Nanomboka ny volana septambra 2016 no nanohanan’ny Fonds Canadien des Initiatives Locales (FCIL) an’ny governemanta kanadiana ny Transparency International-Initiative Madagascar anatin’ny fanatsarana ny fitantanana mirindra ao amin’ny kaominina telo sahanin’i Transparency International-Initiative Madagascar ao amin’ny faritra Atsimo Andrefana any atsimon’i Madagasikara.
Nandritry ny roa volana voalohany, ny mpiandraikitra ny tetikasa eo anivon’I Transparency International-Initiative Madagascar dia nanangona ireo rehetra ilaina amin’ny fitantanana mirindra eo anivon’ireo kaominina telo: Sakaraha, Betsinjake, sy Miary.
Ny tsoa-kevitra voalohany dia mampiseho ny finiavan’ireo tompon’andraikitra ao an-toerana, ary koa ny ekipa kaominaly ary ny fiaraha-monim-pirenena, mba hanatsara ny fahaiza-manaon’izy ireo amin’ny fitantanana mirindra ho fanatsarana ho an’ny rehetra. Na izany aza anefa dia maro ireo sakana manoloana ireo kaominina ireo.Mitaraina izy ireo amin’ny hakelin’ny fanampiana entin’ny fanjakana sady koa mbola tapatapaka. Tsy fahampiana maromaro no hita amin’ny fitantanana mirindra. Isan’izany ny tsy fahampian’ny fampahafantarana ireo olona mahakasika ny fampiasana ny vola. Tsy misy takelam-pamantarana na zara raha ampiasaina ary tsy misy fomba hafa entina hampahafantarana ireo olona mahakasika ny vola. Ny anjara asan’ny fiaraha-monim-pirenena dia zara raha fantatr’ireo mponina.Ireo fikambanana misolo tena ireo olom-pirenena dia zara raha antonina mandritry ny fandrafetana sy fampiasana ny tetibola.
Mba entina hamaliana ireo filàna hita ireo, ny Transparency International-Initiative Madagascar dia hikarakara andiam-panofanana mahakasika “ny fitantanana mangarahara sy mampandray anjara ny rehetra”.
Ireo atrikasa dia natao ho an’ireo ekipa kaominaly sy ireo fiaraha-monim-pirenena:
7 sy 8 desambra ao Sakaraha
14 sy 15 desambra ao Miary
17 sy 18 desambra ao Betsinjaka
Aorian’ireo fanofanana ireo,ny mpiandraikitra ny tetikasa dia hanaraka akaiky ireo tompon’andraikitra mandritry ny roa volana mba hametrahana an-tsakany sy an-davany ireo tetika nampianarina.
Mba hampahafantarana ireo mponina sy mba hampandraisana andraikitra azy ireo anatin’izany fanovana izany dia hisy ireo seho sehatra izay ho atao eny amin’ny toerana natao hoan’ny daholobe any amin’ireo kaominina ary koa ny fandaharana amin’ny onjam-peo eny anivon’ny onjam-peo eny an-toerana.
Ity tetikasa ity dia mikendry ny hamerina ny fifampitokisana eo amin’ireo olom-pirenena sy ireo olom-boafidy amin’ny alalan’ny fanaporofoana fa ny fitantanana mangarahara sy fampandraisana anjara ny rehetra (fanatonana ireo tompon’andraikitra rehetra) dia hanatsara ny fiainan’ireo olom-pirenena.